Awqaafta - Aasaaska Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Mashruuca Awqaafta ee Hada: Hub
Gugii 2017, wakiillada aasaaska iyo guddiga dugsiga ayaa oggolaaday ka-qaybgalkayaga ballaarinta iyo xoojinta tonka barnaamijyada manhajka iyo taageerida barashada Makerspace.
Ardayda Minnetonka waxay noqon doonaan hal abuureyaal iyo hal abuurayaal.
Hadafku maahan oo keliya in carruurta la siiyo qalab ay ku dhisaan waxyaabaha ay qiyaasi karaan, laakiin waa in la qiyaaso adduunka ay dhisi karaan.
Xirfadahaan xirfadeed waxay ardaydeenna ka dhigaan kuwo dhib badan oo iskaashi iyo mushkilad-xaliyayaal ah, si aad ah loo shaqaaleeyo laguna guuleysto goobaha firfircoon ee qarniga 21-aad.
Gaar ahaan, guddigan aasaasiga ah ee loo qoondeeyay mashruuca Sanduuqa Dhaqaalaha wuxuu bixiyaa qalab, tababar iyo dhacdooyin lagu taageerayo gacmo-barashada khibradaha ku saabsan teknolojiyadda, sayniska kombiyuutarka, naqshadeynta, sameynta iyo injineernimada ee dugsiyada preK-8 Minnetonka. Kaqeyb qaadashada aasaasiga ayaa bixin doonta khibrado waxbarasho oo ardaygu wado oo furan oo dhiirrigeliya hal-abuurka, iskaashiga iyo wada shaqeynta si loo gaaro himilo.
Sanduuqa Awqaafta ee Aasaaska
Xasilooni, ilo dakhli oo joogto ah, Sanduuqa Dhaqaalaha ee Aasaaska $ 1.2 milyan ayaa noo oggolaanaya inaan taageerno muddada-dheer, saameynta ballaaran, guddiga aasaasiga ee loo qoondeeyay barnaamijyada. Waxaa maamula shirkad maalgashi xirfadlayaal ah iyadoo la raacayo mabaadi'da maalgashiga adag ee ay ansixiyeen guddiga Aasaasiga. Guddi maalgashi oo ah mutadawiciin aqoon sare leh ayaa si joogto ah u kulma si ay ula socdaan faylalka maalgashiga.
Mashaariicdii Aasaasiga Aasaasihii Hore:
Xarunta Qoraalka: Sannadkii 2007, ayay Mu'asasadu daah furtay mashruucii ugu horreeyay ee ay maalgeliso Awqaafta, Xarunta Qoraalka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Xarunta Qoraalka waxay taageertaa dhammaan ardayda iyo shaqaalaha MHS illaa 1: 1 shirarka qoraalka, aqoon isweydaarsiyo, iyo wacyigelin. Hal macalin qoris waqti-buuxa ah iyo 22 tababarayaal qorista ardayda oo si wanaagsan u tababaran waxay u adeegaan qorayaasha fasalada 9-12 waxayna ka shaqeeyaan mashaariicda da 'kala-gudubka ee ardayda dhexe iyo hoose.
XARUNTA QORAALKA MHS
Barashada Caalamiga: Wada shaqeynta degmada, Kheyraadka Aasaasiga wuxuu kordhiyay baaxada iyo saameynta barashada aduunka ee ardayda Minnetonka iyadoo loo marayo qaabeynta manhajka iyo tababarka macalimiinta laga soo bilaabo 2013-2016. Mu'asasadu waxay sidoo kale u dabaal degtay ka mid noqoshada Aragtida Caalamiga ah mid ka mid ah sideed qodob oo muhiim u ah khibradaha qoto dheer iyo macnaha badan ee ardayda ee qaab dhismeedka waxbarista iyo barashada Minnetonka, iyadoo la dhisayo dhaxal waara oo barashada caalamiga ah ee dhammaan manhajka Minnetonka.
Qaabdhismeedka Baridda iyo Barashada